महोत्तरीमा पठनपाठन ठप्प पारी २ दिन विद्यालय बन्द -
महोत्तरीमा पठनपाठन ठप्प पारी २ दिन विद्यालय बन्द
महोत्तरी, जेठ २९ गते ।
महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका २ स्थित श्री माध्यमिक विद्यालय निगौंल मंगलबारदेखि बन्द गराइएको छ । समाजवादी पार्टी नेपालका नेता लक्ष्मी महतोका भतिजको विहेको भोजभतेरका कारण मंगलबार बन्द रहेको विद्यालय आज दोश्रो दिन पनि खुलाइएको छ ।
विद्यालयमा मंगलबार दिनभर भोजभतेर चल्यो। विद्यालय हाताभित्रै परिकारहरु पकाउनेदेखि खुवाउने कामसमेत गरियो। जसका कारण पठनपाठन हुन सकेन। मंगलबार नै भौजभतेर सकिए पनि आज पनि विद्यालय बन्द छ ।
आखिर पठनपाठन नै ठप्प पारी २ दिनसम्म कसरी विद्यालय बन्द गराइयो त ?
विद्यालयमा विवाहको भोज गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नै निर्णय गरेर स्वीकृति दिएको बताइएको छ । उता विद्यार्थीलाई भने बिदाको जनाउ दिइएको थियो। पठनपाठन रोकेर आयोजना गरिएको भोजमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र नेताहरू समेत सामेल भएका थिए । सुशासन कायम गर्ने निकायकै व्यक्ति तथा नेताहरुले दिद्यार्थी बसेर पढ्ने डेक्सबेन्चमै भोज खाएको दृश्य उदेक र रमितालाग्दो देखिन्थ्यो ।
यसबारे कारण सोध्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शत्रुधन रामले ठूला व्यक्तिको बिहेमा जन्ती राख्न र विवाह भोज खुवाउन पहिलेदखि नै स्कुल बन्द गराउँदै आएको गैह्रजिम्मेवार जवाफ दिनुभयो । ‘व्यवस्थान समितिले नै विद्यालयका जग्गादातालाई आवश्यक परेमा विवाह र व्रतबन्ध गर्न एक दिन स्कुल बन्द गर्न पाइन्छ भन्ने निर्णय गरेको छ । त्यहीअनुरूप मंगलबार विद्यालय बन्द गरेर विवाह भोज भयो,’ उनले भने । लक्ष्मी महतो, नरेश सिंह, कपलेश्वर सिंह, शलाम शेकले विद्यालयलाई जग्गा दिएको उनले बताउनुभयो ।
विद्यालयका कक्षाकोठा र चौरमा मंगलबार साँझसम्म भोज खानेको आउजाउ चलिरह्यो। आज कक्षाकोठा र डेक्सबेन्चमा भोजको जुठो तथा फोहोरले गर्दा आज पनि विद्यालयको पठनपाठन ठप्प छ। अहिले पनि विद्यालयको हाताभित्र प्लास्टिकका गिलासहरु तथा भातका सिताहरु चारैतिर फ्याँकिएको देखिन्छ । विद्यालयमा नेता लक्ष्मी महतोले भतिज सचिनको विवाहको प्रीतिभोज गरेका हुन्। भोजमा नेता, कार्यकर्ता, गाउँले, प्रहरी, प्रशासन सबै आमन्त्रित थिए। भान्से भरत साहले मंगलबार बिहानैदेखि स्कुलमा भोज पकाउन सुरु गरेको बताउनुभयो ।
गौशालाका स्थानीय वीरेन्द्रकुमार साहका अनुसार स्कुलमा पहिलादेखि नै भोजभतेर गर्ने, खुवाउने र बाराती (जन्ती)लाई सुताउने काम हुँदै आएको छ। उनले भने, ‘अब सुधार गर्नुपर्छ। विद्यालयलाई विद्यार्थी पढाउन प्रयोग गर्नुपर्छ।’
यस सम्बन्धमा गौशाला नगरपालिकाकी उपमेयर आशा लामाको पनि गैह्रजिम्मेवार जवाफ सुनियो। ‘स्कुलमा विवाह भोज गर्नु ठिक होइन। बिहानको पढाइ भएर दिउँसो भोज गरेको सोचेको थिएँ,’ विवाह भोजका नाममा विद्यालय बन्द गराएर बालबालिकालाई पढ्नबाट वञ्चित गर्न पाइन्छ? भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘त्यो प्रश्न नेता लक्ष्मी महतोलाई नै सोध्नुस् ।’
गाउँमा सार्वजनिक ठाउँ अभाव भएकाले विद्यालयमा भोज आयोजना गर्नुपरेको नेता महतोले बताए। ‘गाउँमा भोज गर्ने कुनै ठाउँ छैन। बाध्यताबस स्कुलमा भोज गर्नुर्पयो,’ उनले भने । विद्यालयको पठनपाठन बन्द गराई भोज भतेर गर्नु सरासर गलत भएको मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल महोत्तरीका सचिव रञ्जन भण्डारीले बताउनुभयो ।
उनले यस्ता गतिविधि गर्ने र गराउनेलाई उचित कारबाही गर्न सम्बन्धीत निकायले कदम चाल्नु पर्ने आवश्यक्ता रहेको जिकिर गरेका छन् ।
ब्रेकिङ्ग मुख्य-1 समाज
धनुषामा ट्रीपरको ठक्करबाट एक शिक्षकको मृत्यु , हत्या गरेको शिक्षक संगठनको दावी
Posted on March 5, 2018 March 6, 2018 Author शैलेन्द्र क्रान्ति
जनकपुरधाम , फागुन २१ गते । धनुषामा ट्रीपरको ठक्करबाट एक शिक्षकको मृत्यु भएको छ । धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका २ भूचक्रपुरको राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय रमौलीटोलका शिक्षक ५० वर्षका हरिनारायण यादवको मृत्यु भएको हो । जनकपुर ढल्केवर सडकखण्डको मिथिला नगरपालिका २ जेडडीपी स्थित ज ६ प ९०९५ नम्बरको मोटरसाईकल चलाएर जाँदै गरेका शिक्षक यादवलाई ढल्केवर तर्फबाट आउँदै […]
जनकपुरमा धुमधामसंग जानकी नवमी मनाइदै, प्रदेश २ मा सार्वजनिक विदा, राष्ट्रपति आउँदै
Posted on May 13, 2019 May 13, 2019 Author शैलेन्द्र क्रान्ति
शैलेन्द्र क्रान्ति- जनकपुरधाम , वैशाख ३० गते । जनकपुरमा आज जानकी नवमी एवं जानकी जन्ममहोत्सव धुमधामसित मनाइदैछ । वैशाख शुक्ल नवमीको आर्थात आजकै दिन आदर्श नारी सीताको मिथिलामा जन्म भएको धार्मिक मान्यता अनुसार प्रत्येक वर्ष जानकी नवमी भव्यतासाथ मनाउँने गरिन्छ । जानकी नवमीको अवसरमा आज विहानैदेखि जनकपुरको जानकी मन्दिर, राम मन्दिर, जनक मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर […]
महोत्तरीको जनता माविका अतिक्रमणमा परेको जग्गा आफ्नो स्वमित्वमा